Bing wuxuu dib u habayn ku sameeyay Site Explorer Tools Webmaster-ka cusub ee Bing | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Bing waxa uu dib ugu habayn ku sameeyay Site Explorer Tools Webmaster-ka cusub ee Bing
Bing waxa uu dib ugu habayn ku sameeyay Site Explorer Tools Webmaster-ka cusub ee Bing
Microsoft Bing ayaa ku dhawaaqday dib u howlgelinta Bing Site Explorer. Yaan lagu khiyaanayn, Bing Site Explorer waa dib u habayn dhamaystiran oo laga sameeyay noocii hore. Bing si fudud ugama guurin sifada noocii hore ee Aaladaha maamulaha mareegaha Bing una guurin nooca cusub ee Toolsmaster Webka Bing.
Fabrice Canel oo ka socda Microsoft ayaa noo sheegay, "Tani waa waayo-aragnimo cusub oo dhammaystiran, ka nadiifsan oo aad uga sahlan in la isticmaalo oo la dhammaystiro nidaam cusub oo lagu taageerayo qalabkan."
"Hadda waxaan bixinaa waayo-aragnimo degdeg ah oo hillaac ah, oo ay ku jiraan goobo aad u waaweyn, iyo waayo-aragnimo waxqabad badan oo ka caawinta SEO-yada inay si dhakhso ah u baaraan goobahooda," ayuu raaciyay.
Sida uu u eg yahay Site Explorer. Halkan waxaa ah sawirka shaashadda ee qalabka cusub:
Sawirka: Microsoft Bing.
Waa maxay Site Explorer ku tusinaysaa. Bing Site Explorer ayaa ku tusinaysa sida Microsoft Bing u aragto goobtaada. Waxay ku tusi doontaa sida inta badan URL-yada Bing uu ku arkay shabakada marka la tilmaamayo. Tan waxaa ka mid ah jiheynta, xiriiriyeyaasha jaban, URL-yada ay xireen robots.txt.
Bing waxay u abaabushaa macluumaadkan oo dhan "sidoo kale qaabka sahamiyaha faylka oo kale," Microsoft ayaa tiri. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku jebiso aragtidaada gal hagaha sida interface, si aad u fahmi karto oo aad u dejiso goobtaada iyadoo lagu saleynayo qaabka gudaha ee goobtaada.
Waxaad awoodaa inaad aragto gujisyo, aragtiyo, tirinta backlinks iyo in ka badan. Waxa kale oo aad codsan kartaa tusmaynta qalabka dhexdiisa oo aad ku tijaabiso URL kasta aaladeeda tijaabiyaha robots.txt.
Tilmaamay - Tirada URL-yada si guul leh loogu tilmaamay galkaas.
Khalad – Khaladaad gurguurasho oo halis ah oo horseeday in aan la tilmaamin URL-yada.
Digniin - Kuwaas waxaa ku jiri kara URL-yada leh arrimaha habraaca, arrimaha gurguurashada ku meel gaadhka ah ama robots.txt waa la diiday, iwm. maamulayaasha shabakadaha waa in ay si xilliyo ah u hubiyaan korodhka/hoos u dhaca tirooyinkan.
Laga saaray - URL-yada leh xadgudubyada spamka, darajo hoose iwm.
Sababta aan u danayno. SEO-yada iyo maamulayaasha mareegaha waa inay daneeyaan sida makiinadaha goobuhu u gurguurtaan, u kala saaraan oo u kala saaraan goobahooda mareegaha. Qalabkani waxa uu siinayaa SEO-yada macluumaadka ku saabsan sida Microsoft Bing u sameeyo oo kaliya ka dibna ku siinaya xog badan oo ku saabsan gujisyada, aragtiyaha, isku xirka, khaladaadka, digniinaha, arrimaha tusmaynta iyo wax ka badan.
Way mudan tahay in la baadho qalabkan la cusboonaysiiyay ee Bing Site Explorer. Waxaad ka heli kartaa bogga bing.com/webmasters/siteexplorer.
la xiriira: The Tilmaamaha Muhiimka ah ee SEO: Master of Science of SEO
Tilmaamaha tayada raadinta Google cusboonaysiinta waxay jebisaa natiijooyinka qaamuuska iyo encyclopedia iyo in ka badan
Fursada u dambaysa: Raadinta Qiimayaasha Bandhiga Suuqgeynta ayaa kor u kacaya 2 maalmood gudahood!